မြန်မာပလာဇာ က ဆိုင်ခွဲအားလုံးကို အထိနာသွား အောင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရှောင်ရှားကြဖို့ တိုက် တွန်းပြောဆိုလာတဲ့ မေဦး – XB Media & News
မြန်မာပလာဇာ က ဆိုင်ခွဲအားလုံးကို အထိနာသွား အောင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရှောင်ရှားကြဖို့ တိုက် တွန်းပြောဆိုလာတဲ့ မေဦး
Makeup Artist မေဦးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ သတ္တိရှိမှုတွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို လေးစားအားကျနေကြရတာပါ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကိုတော့ မေဦးရဲ့ လူမှုကွန်ယက် များတွင် ဝေမျှပေးနေတာပါ။
မေဦးကတော့ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာတွင် တော်လှန်ရေးအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ခံယူချက်တစ်ချို့ကိုလည်း အမြဲရေးသားဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ညမှာတော့ မေဦးက ရန်ကုန်မြို့က အထင်ကရဖြစ်တဲ့ မြန်မာပလာဇာ ဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကို ပလာဇာ လုံခြုံရေးတွေက ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတာပဲဖြစါပါတယ်။
ရန်ကုန်ကပြည်သူတို့ကူညီပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်🙏ဒါလေးတော့ကူပေးကြဗျာ 👇
❗Myanmar Plaza ကိစ္စက တော်‌တော် စပ်ဆုတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်
Boycott ဆိုပြီး မသွားဘူးလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကို “ခဏပါကွာ။ ပြီးရင်ပြန် လာမှာပါ” ဆိုပြီး သူတို့ Management က ခုချိန်လောက်ဆို ခနဲ့တဲ့တဲ့ပြောနေမယ်ဆိုတာ သတင်းစာတိုက်မှာလုပ်တုန်းက ဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခေါ် Deal ခံရဖူးတဲ့လူမလို့သိပါတယ်။Center တစ်ခုလုံး နောက်နေ့ကစ ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ကောက်ရိုးမီးမဟုတ်ကြောင်းကတော့ ပြရမှာပဲ။ ဒါကတစ်ပိုင်း။ဒါပေ မ ယ့် ရန်သူကို တိုက်ခိုက်မယ်ဆို ပျော့ကွက်ကို ရှာရတယ်မလား?
ဆိုတော့ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေ အကုန်ရပ်သွားအောင် အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုပါ “ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ Myanmar Plaza ဆိုင်ခွဲ Relocate လုပ်ပါပြီ” လို့စာမထုတ်မခြင်းရှိသမျှ ဆိုင်ခွဲအားလုံး ရှောင်ကြရအောင်။လိုအပ်လို့လားဆို။ ဒီပွဲနိုင်‌ဖို့ ဒီလောက်တော့ Pressure ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင် “ငါမထိပြီးရော” ဆိုတဲ့ တခြား လူတွေနဲ့ Organization တွေလည်း လိုက်လုပ်လာပြီး မြို့ပြဆန္ဒပြပွဲတွေ ရပ်တန့်သွားတော့မယ်။ ဒါမရှိတော့ရင် “သွေးအေးသွားကြပါပြီ” ဆိုပြီး တကယ်စွန့်နေတဲ့လူတွေလည်း စိတ်ဓာတ်ကျလာမယ်။ ဆိုတော့ “လိုကိုလိုတယ်” !!!
ပုံမှန်မွေးနေ့မှာရနေကျလက်ဆောင်မျိုးနဲ့ မတူဘဲ တမူထူးခြားလှတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို အမာခံပရိ သတ်တွေဆီကနေ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မင်းခန့်
Myanmar Plazaကို နောက်နေ့သွားတဲ့လူတွေ ဒလန်ပဲလို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် Rဇာနည်